dr.fone: Ungazidlulisa njani izingxoxo zeWhatsApp phakathi kwe-iOS kunye ne-Android | Iindaba zeGajethi
U-Eder Esteban | | Android, software
Kungenzeka ukuba ngexesha elithile tshintshela kwenye i-Android smartphone uye kwenye nge-iOS okanye ngokuchaseneyo. Inkqubo yokuhambisa idatha ayisoloko ichanekile. Ukongeza, kukho inkalo ngokuqinisekileyo exhalabisa abasebenzisi abaninzi, eziziincoko zabo kuWhatsApp. Kuba unokufuna ukuhambisa yonke idatha yeapp usuka kwenye ifowuni uye kwenye. Kodwa asazi kukhululeka. Kule nkalo, dr.fone uncedo elungileyo.
Ndiyabulela kwesi sixhobo, siya kuba nakho ukubanakho dlulisa i-WhatsApp kwi-smartphone ye-Android iye kwi-iOS enye okanye ngokuchaseneyo. Ukuze sibe nayo yonke idatha esiyisebenzisa kwi-app yemiyalezo edumileyo ngalo lonke ixesha. Le yenye yeempawu ezininzi esinazo ziyafumaneka kwi dr.fone. Eyona nto inomdla kuninzi.
1 Yintoni dr.fone?
2 Isebenza njani le nto kwi-dr
3 Backup kwaye ubuyisele WhatsApp izingxoxo
4 Indlela yokukhuphela dr.fone
Wondershare - dr.fone Yi isixhobo esisinika uthotho lwemisebenzi I-smartphone yethu, zombini i-iOS kunye ne-Android. Siyabulela kuyo, sinethuba lokwenza izinto ezithile kwifowuni. Kukho ithuba lokulungisa iingxaki zefowuni, ukubuyisela idatha kubo, ukucima idatha yesixhobo ukukhusela ubumfihlo okanye ukubuyiswa kwedatha. Nangona umsebenzi weenkwenkwezi kwi-dr.fone kukubuyisela usetyenziso lwentlalo.
Kungenxa yalo msebenzi sithetha ngawo kule meko. Enkosi ngayo sinokubakho thumela ngaphandle okanye ugqithise ezi ngxoxo kuWhatsApp ukusuka kwenye i-smartphone ukuya kwenye ngendlela elula kubasebenzisi. Ke le nkqubo ikhuselekile, ilula kwaye ikhawuleza kakhulu ngawo onke amaxesha. Ngaphandle kwamathandabuzo, isixhobo esasilindelwe ngabaninzi kwaye kunokwenzeka nge dr.fone.
Isebenza njani le nto kwi-dr
Enkosi kweli nqaku, kuyakwazeka ukudlulisa ezi ngxoxo phakathi kwe-Android kunye ne-iOS smartphone, kumacala omabini. Inkqubo yokusebenzisa ayinangxaki kakhulu, kuba siya kuba nakho ukuyenza ngokuthe ngqo. Kufuneka nje download dr.fone kwisixhobo, kule meko kwi computer, kwaye uyazise. Xa siyivula, sinomsebenzi okhoyo obuyisela iiNkqubo zoLuntu.
Enkosi ngalo msebenzi kunjalo kunokwenzeka dlulisa i-WhatsApp phakathi kwe-Android kunye ne-iPhone okanye ukusuka kwenye i-smartphone ukuya kwenye ngendlela elula. Ke ngoko, xa dr.fone isebenza, lo ngumsebenzi ukukhetha kuqala. Emva koko, inkqubo iya kucela umsebenzisi ukuba akhethe usetyenziso apho afuna ukuhambisa khona ezi ngxoxo, kule meko yi-WhatsApp. Ke ngoko, kuya kufuneka ucofe ku-WhatsApp kule meko.
Emva koko ucofa kwindlela yokuDlulisa imiyalezo ye-WhatsApp. Ke, Ii-smartphones ezimbini ekuthethwa ngazo kufuneka ziqhagamshelwe kwikhompyuter. Nokuba zimbini ii-smartphones ze-Android, ii-iPhones ezimbini okanye imodeli nganye nganye. Xa sele benxibelelene nekhompyuter, kuya kufuneka ucinezele iqhosha lokudlulisa, ukuze inkqubo iqale. Emva koko, dr.fone idla ngokubonisa imiyalezo embalwa yesilumkiso, ekufuneka siyamkele nangayiphi na imeko. Emva koko, inkqubo yokuhambisa ezi ngxoxo ze-WhatsApp ziya kuqala ukusuka kwesinye isixhobo ukuya kwesinye.
Xa igqityiwe, kuya kufuneka uvule i-WhatsApp kwi-smartphone entsha, ekuthe kuyo idatha idluliselwe. Ke, ngaphakathi kosetyenziso Kufuneka ubuyisele ezi ngxoxo. Ke siya kuba nazo zonke izingxoxo ebesinazo kwi-app ezifumanekayo kwakhona enkosi kwi-dr. Inkqubo ayinzima kwaye igqitywa ngokusemthethweni kwimizuzu nje embalwa.
Backup kwaye ubuyisele WhatsApp izingxoxo
Nangona ukudlulisela ayisiyiyo kuphela into dr.fone ekuvumela ukuba uyenze. Kuba ikwabonelela ngesakhono kubasebenzisi kwi-ryenza isipele okanye ubuyisele izingxoxo zeWhatsApp Ngendlela elula. Ngaphandle kokungathandabuzeki iyenza inketho epheleleyo. Konke oku kunokwenzeka ngaphakathi komsebenzi ofanayo esiwusebenzise kwicandelo elidlulileyo.
Ivumela abasebenzisi ukuba balondoloze iincoko zabo ukuze kungabikho datha ilahlekileyo ngalo naliphi na ixesha. Le yinto elula ukuyenza. Ngaphakathi kolu khetho lokuBuyisa iNkqubo yoLuntu apho singene khona ngaphambili, sikwanokukhetha ukwenza isipele, esivumela ukuba senze isipele kwiingxoxo zeapp. Yinto ekufuneka siyenzile ngelixa ifowuni ekuthethwa ngayo ixhunyiwe kwikhompyuter, ukuze siyisebenzise.
Kwelinye icala, sinethuba ukubuyisela izingxoxo usebenzisa dr.fone. Nje ukuba kwenziwe ugcino lwazo, xa isicelo semiyalezo sivulwa kwifowuni, sele unalo olu khetho ukubuyisela imiyalezo ye-WhatsApp kwisixhobo. Ke kuya kufuneka ukhethe ifayile ofuna ukuyibuyisela, kwimeko apho kukho iikopi ezininzi zokugcina ezenziwe. Ukongeza, abasebenzisi banikwa ithuba lokukhetha ukuba zeziphi izingxoxo kwi-app abafuna ukuzibuyisela. Ke umsebenzisi unegama lokugqibela ngale ndlela ngaphandle kwengxaki.
Indlela yokukhuphela dr.fone
Njengoko ubona, dr.fone sisixhobo esiluncedo kakhulu kwizigidi abasebenzisi ehlabathini lonke. Ke ngoko, ukuba uza kuhamba ukusuka kwi-Android ukuya kwi-iOS okanye ngokuchaseneyo, sisicelo esinokwenza ukuba le nkqubo ibe lula kakhulu ngalo lonke ixesha. Ukongeza, isinika imisebenzi emininzi, ngaphandle kwale siyikhankanyileyo. Yinkqubo ekufuneka siyikhuphele kwikhompyuter, iyahambelana neWindows kunye neMac.
Ukuba sifuna ukusebenzisa dr.fone, sinokuzikhuphelela usetyenziso simahla kwikhompyuter, kweli qhagamshelo. Nangona lo msebenzi wokubuyisela kwezentlalo sithetha ngawo, yinkqubo ehlawulwayo. Sinothotho lwezicwangciso zokuhlawula ezikhoyo, ukuze ukwazi ukukhetha eyona inomdla kakhulu, kuxhomekeke ekusebenziseni ofuna ukukwenza. Ungabona kwiwebhu zonke izicwangciso ezikhoyo.
Kwimeko nayiphi na into, kulungile ukuthatha ingqalelo ukusetyenziswa okwenziweyo, ngaphambi kokukhuphela le app. Ukuze ubone ukuba iyinto esetyenziswayo na kumsebenzisi. Ke, kuya kuba lula ukukhetha isicwangciso esifanela eyona nto uyikhangelayo. Nangona unamathuba okwenza uvavanyo olukhululekileyo, ngokuqinisekileyo luya kuba luncedo olukhulu kule nkalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Android » dr.fone: Isixhobo sokuhambisa nokubuyisela i-WhatsApp kwi-iOS nakwi-Android
Uhlobo lweAmazon ngokukhanya okuhlangeneyo, kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuphucula i-Kindle [UHLAHLELO]
Sivavanye i-Xiaomi Mi ye-Smart Smart Bulb, enye yeebhalbhu zexabiso eliphantsi kwintengiso